137 vashanyi veRussia vakavharirwa muCuba mushure mekuyedzwa kweiyo COVID-19
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Cuba Kupwanya Nhau » 137 vashanyi veRussia vakavharirwa muCuba mushure mekuyedzwa kweiyo COVID-19
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Cuba Kupwanya Nhau • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • Kutarisirwa • Russia Kuputsa Nhau • chengetedzo • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Ruzhinji rwevashanyi veRussia vakasurukirwa pamusoro pekufungidzirwa kwehutachiona hwe COVID-19 havaratidze zviratidzo, uye vanonzi vakabayiwa nhomba muRussia rwendo rwavo risati rasvika.
Vanenge zana nemakumi matatu nevashanyi veRussia vakaedzwa vaine hutano kune COVID-130 mushure mekusvika muVaradero, Cuba muna Chikumi 19.
NeSvondo, paive nemishumo yevashanyi vanopfuura zana nemakumi mashanu.
Nhengo dzinoverengeka dzevashandi veendege dzakayedzawo zvakanaka kune COVID-19.
Sekureva kweRussia Consul General muHavana, Cuba, vanopfuura zana nemakumi matatu vevashanyi veRussia vakavharirwa mumakamuri avo ehotera pamusoro pekufungidzirwa kwehutachiona hweCOVID-130.
“Pakazosvika Chikunguru 4, vanhu 127 kubva kunendege vakasvika musi wa30 Chikumi uye Chikunguru 1 vanoramba [vari vega] nemiyedzo yakanaka yeCOVID-19. Tinotarisira mhedzisiro yekudzokorora bvunzo dzevanhu makumi masere vakasvika muna Chikunguru 80. Kana vari vanhu vakasvika musi wa1 Chikunguru, kune vanhu gumi vakaonekwa vaine hutachiona, […] uye tinotarisira mimwe mibairo nhasi, ”Consul yakadaro.
Pakutanga, iyo Mumiriri weGeneral akataura kuti vanhu vanosvika zana nemakumi matatu vakaedzwa vaine hutachiona mushure mekusvika muVaradero muna Chikumi 130, kusanganisira vanoverengeka vevashandi vendege. Bvunzo yekudzokorora yakadzosera mibairo yakanaka kune makumi matatu nevatatu. Paive nemiyedzo makumi masere yakanaka pakati pevaifamba nendege yaitevera.
Sezviri pachena, vazhinji vevashanyi vari voga pamusoro pekufungidzirwa kwehutachiona hweCVV-19 havaratidze zviratidzo, uye vanonzi vakabayiwa nhomba muRussia vasati vafamba. Ivo zvakare vane mapepa paPCR bvunzo dzakatorwa muRussia, izvo zvakare zvinoratidza zvakashata mhedzisiro.
Pakutanga kwaJune, kwave kune vangangoita zviuru zvitanhatu zvevagari vemuRussia munzvimbo dzeCuba. Zvinoenderana nemirau yeCuba, vashanyi vanouya vanofanirwa kutora bvunzo dzePCR yehutachiona hweCOVID-6,000 mukati memaawa makumi manomwe nemaviri vasati vafamba. Pepa rinoratidza mhedzisiro yemuedzo usina kunaka rinofanira kuiswa kana uchikwira ndege.